ओली र राधिकाले कहाँबाट ल्याए यति धेरै पैसा र सम्पत्ति ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
ओली र राधिकाले कहाँबाट ल्याए यति धेरै पैसा र सम्पत्ति ?
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सम्पति आफ्नो नाममा जम्मा ४२ लाख रुपैयाँ मात्र देखिएको छ । घरजग्गा तथा अन्य सम्पति पत्नी राधिका शाक्यको स्वाआर्जन रहेको सम्पति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा बुधबार सार्वजनिक गरिएको सम्पति विवरण अनुसार उक्त सम्पति सार्वजनिक गरिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले बुझाएको सम्पति विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको एभरेष्ट बैंकस्थित खातामा ४२ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । उक्त रकम तलब भत्ताबाट प्राप्त भएको पनि बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री पत्नी शाक्यको नाममा माछापुछ्रे बैंकमा ४ लाख र प्रभु बैंकमा ६ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात देखिएको छ । राष्ट्रिय वचत पत्र २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसलाई शाक्यले स्वआर्जन बताएकी छन् । उनले कैफियतमा आफु राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रथम श्रेणीको कर्मचारी रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।
सुन गरगहना १७ –१८ तोला उल्लेख छ । शाक्यकै नाममा भक्तपुरको सूर्यविनायक – २ मा एक रोपनी र आधा रोपनी जग्गा तथा तीन तलको घर र झापाको पृथ्वीनगरमा १० कट्ठा जग्गा स्वआर्जनबाट जोडेको उल्लेख छ ।